ကောင်းတဲ့မင်္ဂလာဆောင်, ဒါပေမယ့်သင့်လျော်သောခါးပန်းကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ဒီပွဲတော်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအလည်အပတ်ဖိတ်ကြားခံရဖို့။ ဘယ်ဟာစားဆင်ယင်နွေရာသီတစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်မှဝတ်ဆင်ရန်နှင့်လှပသောကြည့်ရှုရန်နှင့်သက်သာခံစားရနှင့်မှားယွင်းမဟုတ်သတို့သမီး။ ဟုတ်ကဲ့, ဟုတ်ကဲ့! မင်္ဂလာဆောင်ဧည့်သည်များ, နွေရာသီသို့မဟုတ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့အဆင်မြန်း - နေပါစေသတို့သမီးပွဲတော်၏မိဖုရားများကဲ့သို့ခံစားမိကြောင်းထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရပါမည်။ ဤသည်သူမ၏ပှဲနေ့ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အဆင်းလှသောစားဆင်ယင်င် - သတို့သမီး၏ prerogative ။ နွေရာသီမိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်မင်္ဂလာဆောင်ဘို့စားဆင်ယင်အရသာနှင့်အချိုးအစား၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်အတူရွေးကောက်တော်မူရပါမည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စကမင်္ဂလာဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းလွန်းပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးလျှင်ကြောင့်အသင်းတော်၌အလွန်ရာအရပျထဲကကြည့်ရှုမည်ကိုဘယ်လိုလှပ seductive မတ်မတ်နေပါစေ, သဘောတူသည်။ ဒါကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်သူငယ်ချင်းအတွက်နွေရာသီအတွက်သွားကြဖို့အဘယ်အရာကိုစားဆင်ယင်သနည်း
မရလာဆောင်သတို့သားသတို့သမီးလူတို့အဘို့အပွငျလူ - သူမကဖိတ်ကြားထားသူများအကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြုလုပ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ ဒီကနေတစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်သတို့သမီးကို ရွေးချယ်. ဝတ်စားဆင်ယင်သောအရာကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်း, ဖယ်ထုတ်လိုက်မဟုတ်ကြောင်းအောက်ပါအတိုင်း။ ထိုသို့၏အားသာချက်ယူလုံးဝလိုအပ်သောပါ! သတို့သမီး, ထိုအမျိုးအစား၏ဂန္၏တစ်ဦးဆီးနှင်းဖြူစားဆင်ယင်အပေါ်ရွေးချယ်မှုကိုရပ်တန့်ပါက, ရရှိရန်တူညီတဲ့အရောင်ဝတ်စားဆင်ယင်သူကတန်ဖိုးရှိတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဒဏ္ဍာရီနည်းနည်းအနက်ရောင်ဝတ်စုံနှင့်ဆက်စပ်ထာဝရဆွေးနွေးငြင်းခုံ။ ဒါဟာ, တစ်လောကလုံးဆိုအခါသမယအတွက်ပြီးပြည့်စုံပေမယ့်ထိုမှတပါး, နွေရာသီအတွက်စီစဉ်ထားသော, တစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်မှာနေတဲ့အနက်ရောင်ဝတ်စုံလျှင်သင့်လျော်သောကြောင်းထင်ရမလဲ စတိုင်နဲ့ကြော့ရှင်းတဲ့နမူနာကိုသာမှတ်မိလွယ်တဲ့တောက်ပဆက်စပ်ပစ္စည်းအတူနှစ်လုံးအတွက်ဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်သည့်အမှု၌သင့်လျော်သည်။ (အကြောင်းပြချက်အတွင်း) မှာနက်ရှိုင်းသောများ၏ပုံစံအတွက်ပုံစံမျိုး ဟာ neckline ခွင့်ပြုခဲ့မြင့်မားအလျားလိုက်အပေါက်များနှင့် cutouts ။
အကောင်းဆုံးဂျပု stylist ရုံအထက်တွင်သို့မဟုတ်ရုံဒူးအောက်ကော့တေးစားဆင်ယင်လေပိုင်နက်အရှည်အညီဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်သတို့သမီး၏၎င်း၏အဝတ်အစားများ texture နဲ့တူအောင်ထည်လုပ်ထားတဲ့လျှင်။ ဟုတ်ပါတယ်, သိုးမွှေး, ဂျာစီ, ကတ္တီပါနှင့်ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့ကိုအခြားလေးလံသောအထည်သင့်လျော်မရှိကြပေ။ ထိုသို့သောမတ်မတ်နွေရာသီကြည့်မသာစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်နှစ်သိမ့်တစ်အသိပေးတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာစားဆင်ယင်၏အရောင်သတို့သမီး၏ခါးပန်းကိုကနေမတူညီတဲ့ဖြစ်သင့်သည်ကိုထိုအခါသတိရသင့်သည်။ ဘယ်သူမှမယ့်ဝတ်စုံဆင်တူအရောင်တွေဝတ်ဆင်ရန်တားမြစ်နိုင်ပါသည်, သို့သော်၎င်း၏အရိပ်မှာအနည်းဆုံးနှစ်ခုတန်ချိန်ထက်ပိုမိုပေါ့ပါးသို့မဟုတ်မဲမှောင်ဖြစ်သင့်သည်။ pastel ရိပ် - ကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်း။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောအရောင်အကွာအဝေးနွေရာသီရာသီအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံလောင်းဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာဆောင် Mini ကို Dress
Bolero မင်္ဂလာဆောင် Dress
တစ်ဦး bachelorette ပါတီများအတွက် Fata
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးက Short မင်္ဂလာဆောင်တွင်ဆင်မြန်း
မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံ Zuhair Murad - လက်ဘနွန်ဒီဇိုင်နာများထံမှ chic မတ်မတ်
Belogolovnik - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
မုယောစပါးကနေ Kvass - စာရွက်
မော်နီကာ Bellucci ပရိတ်သတ်တွေစိတ်ပျက်ဝတ်စားဆင်ယင်
သင့်ရဲ့ခွေးကို "မျက်နှာ" အသင်းကိုသင်ပေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Christina Aguilera မိတ်ကပ်မပါဘဲစက္ကူမဂ္ဂဇင်း၏မျက်နှာဖုံးပေါ်မှာကြယ်ပွင့်
Shevchenko နည်းလမ်း - ကင်ဆာဆန့်ကျင်ရေနံနှင့်အတူဗော့ဒ်ကာ
Irina Shayk: တက်ကြွတဲ့လူနေမှုပုံစံ - ဆွဲဆောင်မှုဖို့သော့နှင့်အလှတရား
ကော့နှင့်အတူငါးဟင်းချို - စာရွက်
ကျက်သရေ svadebnik - တန်ဖိုးကို
ပထမဦးဆုံးမုန်တိုင်း - နိမိတ်လက္ခဏာများ
ဝမ်းဗိုက်၏အူအဖြူလိုင်း - ကုသမှုခွဲစိတ်စရာမလိုဘဲ